हिमाल खबरपत्रिका | अब के?
मधेश राजनीतिमा फर्कने
नयाँ पार्टी खोल्ने
लेखक र कवि बन्ने
जेलमा जेपीः पछिल्लो तस्वीर। सौजन्यः परिवार
अदालतले डेढ वर्ष जेल तोके पनि बन्दी/ कैदीको सजाय अवधिमा शनिबार र अरू सार्वजनिक बिदाहरू काटिने नियम भएकाले पूर्वमन्त्री जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता एक वर्षपछि फागुन महीनामै छुट्दैछन्। मधेशी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक)का अध्यक्ष गुप्तालाई सर्वोच्च अदालतले संचारमन्त्री रहेकै अवस्थामा ९ फागुन २०६८ मा भ्रष्टाचारी ठहर गर्‍यो। गुप्ता त्यही साँझ् ८ बजे सदरखोर पुर्‍याइँदा पूरै डिल्लीबजार लोडसेडिङको अँध्यारोमा डुबेको थियो। त्यहाँका प्रहरी निरीक्षकले गुप्ताको पूरै शरीर खानतलासी गर्दै मोबाइल, कागजात र औषधिहरू लिएर कारागारमा स्वागत गरे। दर्ता लगायतका प्रक्रियाहरू पूरा गर्दा जेलको मेस बन्द भइसकेकाले ३६ जना बन्दी बसेको कोठामा गुप्ता भोकै कोचिनु पर्‍यो। साढे दुई महीनापछि मात्र चार जना बस्ने कोठाको सुविधा पाएका पूर्वमन्त्री गुप्ता भन्छन्, “पहिला राजनीतिज्ञहरू धेरै हुन्थे, अहिले आपराधिक मुद्दाका व्यक्तिहरूसँग बस्नुपर्‍यो।”
राजनीतिक जीवन नै लगभग समाप्त गरेको गुप्ताको पछिल्लो जेल यात्रा पहिलाको भन्दा पीडादायी भएको उनको भनाइबाटै थाहा हुन्छ। “जेलमा भीड छ”, आफ्नो पछिल्लो जेल बसाइँबारे गुप्ता भन्छन्, “४० प्रतिशतभन्दा बढी बन्दी ३० वर्ष मुनिका छन्, उनीहरूसँग कुरा गर्दा पीडा हुन्छ।”
पीडा यसकारण कि प्रहरी अनुसन्धान प्रणाली र अदालती प्रक्रियामा रहेको खोटले उनीहरूमाथि कुनै न कुनै रूपले पिरलो थपिदिएको छ। भीड कति भने १८० जना क्षमताको डिल्लीबजार जेलमा ७०० कैदी कोचिएका छन्, बिहान तीन बजे नै नउठे शौच बस्न पनि नपाइने गरी। यसकारण गुप्ताले बिहान ६ बजेअघि नै नित्यकर्म र सामान्य व्यायाम सकेर पढ्ने–लेख्ने बानी बसाए। “बिहान १० देखि अपरान्ह ३–४ बजेसम्म ५०–६० जना भेट्न आउँछन्” गुप्ता भन्छन्, “बेलुका ओछ्यानमा दिनभरिको टिपोट गर्छु, बिजुली हुँदा टेलिभिजन हेर्ने र लेख्ने–पढ्ने गर्छु।”
यो लेख–पढ र चिन्तन–मननको परिणाम, गुप्ताले सदरखोरमा बसी–बसी तीन वटा पुस्तक लेखिभ्याएका छन् भने दुइटाको प्रारुप तयार पारेका छन्। तयार भएकोमध्ये एउटा ११ कविताको संग्रह छ। गुप्ताले यसअघि किताब लेखे पनि कविता कहिल्यै फुरेको थिएन। उनले तयार गरिसकेका अरू पुस्तकमध्ये एउटामा सर्वोच्चका सात वटा विवादित मुद्दाको विवेचना छ भने 'जेलमा कसरी बस्ने?' शीर्षकको १२५ पेजको दोस्रो पुस्तकमा विश्व प्रसिद्ध नेताहरूको जेल जीवनका प्रसंगहरू समेटिएका छन्। जेलमा ८० भन्दा धेरै पुस्तक पढेका गुप्ताले 'मधेश आन्दोलनको इतिहास' पनि लेखेका छन्। गुप्ताले जेलमै भेटेका १० जना पात्रमाथि एउटा साहित्यिक कृति र आफ्नै जीवनको राजनीतिक संस्मरणको प्रारुप तयार पारेका छन्।
यसको अर्थ, गुप्ता जेलमुक्त भएको केही समय कवि–लेखकको रूपमा चर्चामा रहने छन्। त्यसपछि उनी के गर्लान् त? गुप्ता भन्छन्, “मधेशका जनतासँग संवाद गरेर भावी यात्रा निश्चित गर्नेछु, तर, आफैं सत्तामा जान होइन।”
अर्थात्, साहित्य गुप्ताको समय कटाउनी मात्र हो, उनी राजनीतिमै जम्न चाहन्छन्, तर मन्त्री हुन नभई काठमाडौंको सत्ता राजनीतिमा 'किङ मेकर' बन्न। किनभने, भ्रष्टाचारमा जेल नै परेकाले 'संविधानसभा निर्वाचन नियमावली―२०६४' ले उनलाई निर्वाचन लड्न अयोग्य ठहर्‍याएको छ। अर्को कुरा, आफैंले खोलेको पार्टीमा आफू जेल परेपछि आफ्नै कार्यकर्ता राजकिशोर यादवको एकाधिकार भएकाले फोरम (गणतान्त्रिक) छाडिसकेका गुप्ताले 'मधेशका जनतासँग नयाँ संवाद' गर्ने सोच बनाएको बुझन सकिन्छ।